Ahoana no hamantarana sandoka amin'ny tena tantely - Victor Mochere
Ny tantely tena izy dia manana loko miavaka, tsiro, viscosity ary ara-nofo miankina amin'ny voninkazo ilain'ny tantely. Ny nectar avy amin'ny zavamaniry isan-karazany dia hampiseho tsiro sy loko miavaka noho ny tsy fitovian'ny haavon'ny mineraly, anti-oxidants ary singa hafa mety misy. Ny toetra ara-batana sy simika toy izany dia entina ao anaty tantely. Saingy na dia eo aza ny fisian'ny karazana tantely maromaro, ny kristaly no lafiny tsy takatry ny saina indrindra momba ny tantely voajanahary.
Ny ankamaroan'ny orinasa dia manadio tantely, izay mitaky tantely amin'ny hafanana arahin'ny ultrafiltration. Ny vokany dia tena madio mijery tantely izay mijanona amin'ny endrika ranon-javatra nandritra ny volana na taona maromaro. Ny lafy ratsiny dia ny hafanana manimba tantely. Manadio ny anzima misy ao anaty tantely izy io, mamono ny vitaminina sy mineraly ary aorian'ny filtration dia esorina avokoa ireo soritra mahasoa ny propolis sy ny vovobony ary ny hany sisa tavela dia sucrose sy fructose, maltose ary glucose.
Ny tantely manta (izay tsy nofafana na voasivana) dia mivaingana ho azy sy ho azy na dia misy karazany aza mahatohitra kokoa ny kristaly noho ny hafa. Noho izany, ny sasany dia mila andro vitsivitsy vao mivaingana fa ny hafa, toy ny tantely Eucalyptus dia maharitra volana maromaro. Ny tantely manta dia tantely iray manontolo satria misy ny zava-tsoa rehetra avy amin'ny Reny Natiora ary izy no tsara indrindra hohanina na kristaly na tsia. Ilaina ny tantely 12 isaky ny manao 1/12 ny fanaovana tantely eran'ny sotrokely-izay tsara kokoa noho ny mamy misy siramamy.
Na dia manampy amin'ny fividianana tantely tsy manara-penitra ihany koa aza ny vaovao diso, dia izao no fomba ahafantarana ny sandoka amin'ny tena tantely.
Ny fitsapana lelafo – Ampiasaina hamantarana ny hamandoan’ny tantely. Raha mihoatra ny 21 isan-jato ny hamandoana dia na tsy matotra ilay tantely na nampiana rano ka tsy hirehitra ny afokasoka rehefa atsoboka ao anaty tantely. Ny recractometer dia azo ampiasaina hitsapana ny isan-jaton'ny hamandoana
Hafatra mivaingana - Ny tantely manta rehetra dia mivaingana, saingy mitsonika amin'ny hafanana eo anelanelan'ny 36-40 degre. Ny kristaly siramamy dia mila hafanana ambony kokoa mba hiempo
Mitete tsy tapaka - Rehefa mandatsaka tantely amin'ny siny / sotro dia tokony hitohy ny fikorianan'ny rano ary tsy vaky maromaro toy ny ranon-javatra hafa.
Fitsapana ny solubility – Rehefa asiana tantely iray sotrokely ao anaty vera feno rano mangatsiaka dia hipetraka ao ambany vera ny tantely ary tsy levona raha tsy ahetsiketsika.
Fiteny 20 be mpampiasa indrindra eran-tany 2022
Ny fiantraikan'ny fahafahan'ny motera (cc) amin'ny fahombiazana sy ny halavirana